Maguta eCádiz ausingakwanise kupotsa | Kufamba Nhau
Cádiz inharaunda inoshanya kwazvo yeAndalusian uye yakakurudzirwa. Kwete chete muguta rayo tinowana nzvimbo dzekuzvirasisa pachedu, nekuti iri dunhu ratingawana mataundi mazhinji ane chitarisiko cheAndalusian chatichada. MuCádiz tinogona kuwana mahombekombe kana gomo kusarudza kubva, nemataundi akanaka akatova mucherechedzo. Kana isu tichizoziva dunhu iri zvakadzama, hatigone kupotsa iwo madhorobha akanaka.
ari Nzira dzemataundi eCádiz dzakatozivikanwa, nekuti ivo vanomira kunze iwo anozivikanwa iwo chaiwo maguta evachena anoita kunge akagadzirwa kadhi repositi uye ayo anogona kushanyirwa munzvimbo dzakasiyana dzedunhu. Ndosaka tiri kuenda kunoona mamwe emataundi akatanhamara muCádiz ausingakwanise kupotsa kana ukashanyira dunhu.
7 Chiteshi cheSanta Maria
Izvi, sevamwe vakawanda, iri paRoute yemisha yevachena yeCádiz iyo inotitora kuburikidza nemamisha eAndalusia. Iri taundi rinomira pakati pevamwe vazhinji nekuti ine yekutanga Cuevas del Sol mugwagwa uko dzimba dzave dzakavezwa kubva mugomo, idzo dzichiri kuputira mafesheni nenzira inoshamisa kwazvo. Iyo inzvimbo inokwezva kutarisa, kunyangwe uyu mugwagwa unowanzo kuve wakazara nevashanyi vanoda kuona idzi dzimba dzepakutanga. Tinogona zvakare kufamba tichitevedza Calle de la Sombra uye kusvika kuPaza de Andalucía. Mutaundi isu tinogona zvakare kuona Torreón del Homenaje, chinova chisaririra chinosara cheAlmohad nhare kubva muzana ramakore rechiXNUMX nerechiXNUMX. Chekupedzisira, tinofanirwa kukurudzira kufamba mumigwagwa iyi izere nedzimba dzevachena.
Guta rekare reConil de la Frontera ndeimwe yenzvimbo dzisingafanire kupotswa, nedzimba dzaro dzakanaka dzakacheneswa dzakashongedzwa nemarara, iwo mufananidzo chaiwo unodiwa nemunhu wese Iri taundi rinoshanya kwazvo nekuti riri pamahombekombe uye nekudaro rine rakakura mahombekombe seLa Fontanilla kwaunogona kunakidzwa nemamiriro ekunze akanaka. Iyi nzvimbo zvakare yakakwana kuyedza yakakurumbira tuna tsvuku kubva kumusungo uye hove dzakakangwa mumaresitorendi ayo.
Iyo yakasarudzika nhaka yeguta reMedina Sidonia rakakura kwazvo uye rakasiyana. Iyo Santa María la Coronada chechi ine Gothic Renaissance maitiro ane fesheni mune yeHerrerian maitiro. Isu tinowanawo kereke yeSan Juan de Dios kana iyo Hermitage yeSantos Mártires, inova yechinyakare muAndalusia. Iyo Arch yeBheterehema ndiko kuwana kune raive iro guta rekare uye iro reLa Pastora isu tichakwanisa kuona musuwo weArabhu. Tinogona kudzidza zvakawanda nezvenhoroondo yeiyi yakare enclave kana tikashanyira Ethnographic Museum uye Museum uye nematongo nzvimbo yeMedina Sidonia. Pamusoro, pachikomo, tinowana masvingo enzvimbo dzakasiyana dzakadai seRome Castellum kana nhare yepakati nepakati.
Imwe yeiya inonzi White Towns iri Arcos de la Frontera. Tinogona kunakidzwa nemigwagwa yakanaka senge Callejón de las Monjas, inzvimbo ine cobbled ine yakanaka Arcos de las Monjas. Iyi imwe nzvimbo yekufamba uchinakidzwa nedzimba nedzimba dzinoshamisika. Plaza del Cabildo ndiyo yepakati uye mairi tinowana Town Hall, iyo Parador uye kereke yeSanta María yeMudejar mavambo.
Chipiona nderimwe guta riri mumahombekombe iro rinoshamisira nekurarama hupenyu hwakanyarara. Kufamba-famba mumigwagwa yayo uye kuyedza yakajairwa ndiro mumazariro ayo chinhu chinofanira kuitwa kana tikachishanyira. Asi isu tinofanirawo kuona iyo Sanctuary yeMukadzi wedu weRegla nemuseum yayo. Tinofanira zvakare kuenda kuimba yechiedza yeChipiona, inova ndiyo yepamusoro soro muSpain uye ndeimwe yepamusoro-soro pasi rose. Muchokwadi, iwe unogona kukwira asi iwe unofanirwa kupfuura nhanho dzinopfuura mazana matatu dzainazvo, chete kune avo vanokodzera uye vane shungu.
Vejer de la Frontera ine rimwe guta rakanaka rekare ratinofanira kushanyira. Mukadzi Wedu waOliva Street Iyo ndeimwe yeakanaka kwazvo, akatenderedza kereke yeMweya Muponesi. Chechi iyi yakavakwa pane imwe mosque yekare uye inomira kunze kune yayo bell tower. Imwe nhoroondo yenhoroondo mutaundi iri Arco de la Segur kubva muzana ramakore regumi nemashanu, rakavakwa neMamongi echiKaturike uye padyo unogona kuona chikamu chemadziro eguta. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ino nzvimbo, iwe unongofanirwa kuenda kuVejer de la Frontera Museum iri mune imwe imba kubva kunopera kwegumi nemanomwe century.
Chiteshi cheSanta Maria
El Puerto de Santa María iri padyo neguta reCádiz. Mune ino villa tinogona ona zana ramakore rechiXNUMX Castillo de San Marcos. Iwe unofanirwa kupfuura nepakati pePaza de Cristobal Colón uye Plaza del Polvorista uye uone iyo Minor Basilica yeMukadzi Wedu weMinana. Muchiteshi unogona kudya hove dzakakangwa uye kutora chikepe kuenda kuCádiz capital.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Maguta eCádiz